Bolis dheerad ah oo laga howl-gelinayo Södertälje - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bolis dheerad ah oo laga howl-gelinayo Södertälje
Publicerat måndag 29 augusti 2016 kl 09.52
Södertälja ayaa la geynayo bolis dheerad si loo xakameeyo dembiyda culus ee magaladas ka dhaca.
Magaalada Södertälje dhowr goor ayey horey uga dhaceen dagaalo u dhaxeeya kooxo gang ah oo ka jira magaladas, kuwas oo isku xabadeeyey waddooyinka iyo meelaha dadka ku badan yahiin. Balse dhibaatada ganga ee magaaladan ka dhaci jirtay meesha ayey ka baxday kadib markii la badiyey muuqashada boliska magaalada ka howl-gala ayna iskaashadeen maamulka degmada iyo hey'addaha kale ee dowliga ah.
Dayrtana tiro bolis cusub oo gaareysa 40 ayaa magaaladan laga howl-gelinayaa si ay uga hortagaan dembiyada culus ee ka dhaca magaaladan.
PAULA Westerlund oo ku dhalatay kuna kortay magaalada Södertälje ayaa aragtay isbaddel weyn oo xagga amniga oo magaalada ku soo kordhay.
- Runtii dhibaatada laga sheego magaaladan ku arag, ma u maleynayo in Södertälje a dhibaato badan tahay magaalooyinka kale ee Sweden ku yaala. Waxay ilatahay magaaladan anniga mid degan oo dhibaato ka jirin, ayey tiri Paula Westerlund.
nnadkii 2010kii magaalada Södertälje waxaa ku dagaalamayey labo koxood oo gang ah. Kadib dilal badan oo ka dhacay magaalada waxaa ugu dembey lagu guuleystay in la maxkamadeedyo lana xukumo 18 ka mid ah qolyahii ganga. Magaalada waxay ib u noqotay meel degan, sida uu yeri madaxa boliska magaalada Peter Nylind
Runt 2010 pågick en konflikt mellan två kriminella gäng: X-team, en undergrupp till Bandidos, på den ena sidan och Södertäljenätverket på den andra.
- Haddii loo barbardhigo dhowr sanno ka hor magaalada waxaa jiray dhibaato baaxad leh oo ah rabshado u dhaxeeyey qolyo gang ah. Dembiyada magaalada ka dhacaa waxaa badnaayeen , ani xumadana waxaa xoganeyd, qolyaha burcadana waxay heysteen fursado ay howl-sha ay doonan ku fushan karin, ayuu yeri.
Balse dadaal ay iska kaashadeen boliska, maamulka degmada iyo welib hey'addaha dowligga ah ayaa dhalicyey natiijo wanaagsan.
– Daadaalada lagu baxiyey wax ka qabashada dhibaatada magalada ka jirtay wax noqdee kuwo najaxa, waxaa laga sal-gaaray baarista dembiyo hore u dhacay, lana xukumay dad badan, taas oo soo kordhisay deganaansho iyo amni. Laakiin taa micnaheeda ma ahan in aysan magaalada joogin qolyo burcad ah.
Tirakoobka hey'adda BRÅ ayaa muujinaya dembiyada culus, sida iskudey dil, faldembiyeedyada hubka loo adeegsado ay magaalada Södertälje hoos u dhacday marka loo barbardhigi xaalka siduu ahaa sannadkii 210kii.
Weli waxaa jira laakiin xaafado ka mid ah magaalada oo uusan xaalkooda deganeyn. Bishii februari waxda boliska u qaabilsan howl-galada qaran NOA ayaa xaafadaha Geneta iyo Lina oo ku yaala Södertälje u aqoonsaday xaafado u baahan in la siiyo ahmiyad gooni ah xafaadahan iyo 14 xaafadadood kale o ku yaala dalka.
Saas darteed ayaa dhawaan Södertälje waxaa ka shaqo bilaabi doona ciidamo bolis oo dheerad ah oo tiradooda lagu sheegay 40.
Sida uu yeri madaxa boliska Södertälje ciidamadan waxay soo kordhin doonaan joogitaanak boliska ee magaalada iyo weliba wadoshaqeynta hey'adaha kale ee dowlaiga ah.
- Waan dhawaan aragnaa natiijo, wa hadefkayaga ay iskugu geyney quwadaan si ay u gaarno natiijada aan dooneyno. Horey lagama arki doono natijada balse howl-gal haddef dheer laga leeyahay, ayuu yeri Peter Nylind.